शब्दकोश: June 2008
भवतु सब्ब मङ्गलम् - २
धर्ममा रौनकताको पुच्छर
विपश्यना शिविरभरिको यात्रामा धेरै कुराहरू देखिए, अहिले सम्झिँदा लेखेर उतारिनसक्नुका लाग्छन् । तर केही रोचक संस्मरण प्यारा ब्लगप्रेमीहरूलाई बाँड्नु त छँदै छ । त्यही कर्तव्य सम्झिएर यहाँ केही शब्दहरूको पिर्का बिछ्‌याएको छु, भान्छा कस्तो भयो प्रतिक्रिया पाउने नै छु । जुन १४ को शनिबारे मध्यान्हमा ज्योति भवनको भुइँतल्लामा आँखा नै आँखाहरूको मेला लागेको थियो । नयाँ ठाउँ जाने पूर्वसन्ध्यामा ती धेरै आँखाहरूमा यस्तो कौतूहलता टल्किरहेको थियो, मानौँ तिनले भनिरहेका हुन्- त्यहाँ गएपछि के होला, १० दिनसम्म पक्क नबोलीकन टिक्न सकिएला कि नसकिएला, अनि दिनको १० घन्टा पलेँटी कसेर आँखा चिम्लिएर गजधुम्म बस्नु कति पीडादायी होला बाबै !.... यस्तै कौतूहलमा चम्किएका एक हूल आँखाहरूको बखान यस पानामा :
हरे त्यो जोडी !
त्यो जोडीलाई प्यारप्यारे जोडी भन्दा हुन्थ्यो । ध्यान शिविर पुगेको साँझमा कोठाको बेडमा झिटीझाम्टा बिसाउन नभ्याउँदै दुईमध्येको एकले सोधिहाल्यो- 'खाजा खाइयो ? जानु न खानू, हामीले त खाइसकेको ।' एउटा कोठामा आठवटासम्म बेड राखेर साधकहरूलाई बासको प्रबन्ध गरिएको थियो । आठवटा बेडमध्ये दुइटा तिनको भागमा परेको रहेछ । पछि थाहा भयो दुवै कति बोलक्कड तर मिजासिला रहेछन् । १० दिनसम्म इशारा, सङ्केतसमेत नगरी आर्य मौनको पालना गर्नुपर्ने नियम भए पनि यिनले दोस्रो-तेस्रो दिनमै मौन नियमलाई धोती न टोपीको पारिहाले । अर्थात् नियम भङ्ग । साधक-साधिकाहरूको सेवा-व्यवस्था तथा नियमको कडिकडाइको लागि शिविरले व्यवस्था गरेको धर्म सेवकहरूलाई पनि यिनले हायलकायल पारेको देखियो । यी दुवै विपश्यना र ध्यानशिविरबारे सबै कुरा बुझेर आएका रहेनछन् भन्ने तिनकै आपसी वार्ताबाट थाहा भयो । कुनै गुम्बाको भन्ते (भिक्षु) ले पठाएकाले यिनीहरू आएका रहेछन् ।
ध्यानसाधनामा सबैजना जम्मा हुने धम्म हलमा ध्यानको क्रमसँगै साधक-साधिकालाई आलोपालो बोलाएर आचार्यज्यूहरूले अनुभव सोधपुछ गर्न नाम बोलाउने क्रममा थाहा भयो यी मिजासिला युगल मनुवा रहेछन् - लगनखेल ललितपुरका शङ्कर श्रेष्ठ र स्वयम्भूका सुमित शाक्य (ओवास) । शङ्कर व्हाइट हाउस कलेजमा १२ को जाँच दिएर बसेका अनि सुमित डीएभी कलेजमा १२ पढ्दै गरेका । हलमा ध्यान सकेर कोठामा आराम गर्न फर्किँदा देखिन्थ्यो, कतिबेला घन्टी बज्नासाथै कुदेर यी दुइले आ-आफ्नो बेड तताइसकेका हुन्थे । घन्टा-घन्टाबीचको ५ मिनेटको विश्राम पाए पनि यिनको शरीरले हतारिँदै बिछ्यौनाको उही नरम आधार खोजिहाल्थ्यो । कोठामा छिर्नासाथ जोडीको खुसुखुसु गफ र मुसुक्क मुहार सुन्न-देख्‍न पाइन्थ्यो । यिनको हर्कतले कसोकसो आफ्नो साधनामा बाधा आउला कि भन्ने लागे पनि धन्न परहेज रहन सकियो । बरु १० दिनसम्म यो जोडीको उपस्थिलिते झन् बहार थपिरहृयो । यिनको चर्तिकला अद्‍भूत मनोरञ्जन दिइरहृयो । मुस्काउन नपाएर टोलाउनुपर्ने स्थिति खाली समयको कुनै घन्टामा भोग्नुपरेन ।
'दाइ, मच्छरले टोक्यो ?'
दुईमध्ये १८ वर्षका शङ्करको चटपटे स्वरले हँसाइरहन्थ्यो । उता २० वर्षीय सुमितको गम्भीरता भरिएको लबज र हँसमुख मुहारले रौनक थप्थ्यो । कोठामा ८ वटा बेड रहेकोमा पूरा समयसम्म ६ जना मात्र बसियो । कीराले टोक्यो भन्दै आत्तिएर यखा काठमाडौँनिवासी दाइ प्रेमकृष्ण श्रेष्ठ अर्को कोठामा सरे । अर्को एउटा बेड सुरुदेखि नै खाली थियो । कोठामा शङ्कर र सुमितको मस्त जोडीबाहेक आर्य मौनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने पोखरा (हाल कालिमाटी) का ऋषिमणि पराजुली र सर्लाही (हाल वसन्तपुर) का चन्द्रमणि काफ्ले अनि साधनाको छैटौँ दिनदेखि आर्य मौन भङ्ग गर्ने सुनाकोठी ललितपुरका कपिल योञ्जन र म थियौँ । म चाहिँ अर्ध आर्य मौनलाई काखी च्यापेर साधना गरिरहेको थिएँ । अर्ध आर्य मौनमा इशारा, सङ्केत पनि निषेध थियो, तर म भने तिनै जोडीका कारण इशारा गर्न र हाँस्नमा बाध्य बन्दै आएको थिएँ ।
आफू नबोले पनि नियम तोडिसकेकाहरूलाई बोल्न कुनै आइतबारको कुरो थिएन । चौथो दिनमै शङ्करले सोधे -'दाइ, तपाईँको विश्व भन्ने भाइ छ ? अनुहार ठ्याक्कै मिल्छ भन्या !' म अस्वीकृतिसूचक टाउको हल्लाएर मुसुक्क हाँसेँ । अब पालो सुमितको थियो, उनले शङ्करलाई इङ्गित गर्दै दार्शनिक पारामा मुख खोले-' के भन्छ यो मोटे पनि ! संसारमा उस्ताउस्तै मुख भएका आठ जनासम्म मान्छे हुन्छन् रे क्या, अनुहार मिल्न सक्छ ।' अर्को दिन सुत्ने बेलामा तिनै शङ्करले सोधे -'दाइलाई मच्छरले टोकेन ? यहाँ मलाई त क्या टोक्यो भन्या !' यति भनेर उनले पाखुरामा प्याट्ट पारेको सुनियो । सँगैका सुमितले 'के यो आर्य मौनमा रहेको मान्छेलाई बोलाएर ध्यान भङ्ग गर्ने कुरा गर्छ !' भन्दै उनै मोटेलाई मायालु गाली गरे । मैले टोकेको छैन भन्ने इशारा बुझाउन शिर हल्लाएँ, झ्यालबाट बाहिरको प्रकाश छिपछिपे रुपमा छिरेको कोठामा उनले मेरो सांकेतिक भाव सायद देखेनन् ।
मोबाइल, मान्छे र मोबाइल मन
ध्यानमा गएको मान्छेको कत्रो आँट होला, धर्म सेवकको आँखा छल्दै सिरकले मुख छोपीछोपी ती युगल जोडी आलोपालो फोनवार्तामा झुन्डिएको नित्य कर्मसमान देखियो । जब छैटौँ दिनमा रहस्य खुलेर धर्म सेवकले शिविर समापनको दिन दिनगरी मोबाइल लगे, तब आराम भयो । तर फेरि मोबाइल लगेको कुराले बहसको रुप लिन थाल्यो । मान्छे नभएको खाटमा सिरक छोपेर मान्छे सुतेजस्तै पार्दा धर्म सेवक झुक्किएर ध्यानमा जान उठाउन आएको, शिविरको सबभन्दा मोटा मान्छे चुरोट खाँदाखाँदै समातिएर निकालिएको, ध्यानमा सहभागी 'खैरिनी' लाई भोजनालयको चेपोबाट चियाएर हेर्ने युवकहरूको कर्तुत वर्णन, आचार्यहरू को-कस्ता, धर्मसेवकहरूको चिन्डे, झिल्के, लम्बु दाइ उपनाम आदिको कथा-उपकथा रच्न र सुनाउनमा शङ्कर-सुमितको जोडी अब्बल देखियो । तिनको मन नै त्यस्तो चञ्चल थियो, मोबाइलझैँ छलाङ मारिरहने ।
१० औँ दिनमा जब आर्य मौन खुल्यो, तब ती सबै साधक साथीहरूसँगको गफबाट कुरा खुल्दै जाँदा मेरो मुख खुल्लै रहृयो । खासमा रहेछ के भने, आपसमा तँतँ मम भनेर सम्बोधन गर्ने, लात हानेर एक-अर्कालाई बेडबाट भुइँमा खसाल्ने त्यो गजबको जोडीको पहिलो भेट नै शिविरमा आउने दिन ज्योति भवनस्थित विपश्यना नगर कार्यालयमा भएको रहेछ । ओह्, यस्तो पनि हुँदो रहेछ ! त्यसमा झन् शिविरमा अरु कोही बोल्ने मान्छे नहुँदा उनीहरू अनपेक्षित रुपमा निकट भएका थिए । विपश्यनामा आउनको लागि कुनै बेला मैले पनि कसैलाई सँगै जाऊँ भन्ने अनुनय गरेको थिएँ । १० दिनको मौन शिविरमा आएका अञ्जान दुई मन ध्यानसाधना भुलेर त्यस्तरी गफिएको देखेर मेरा आँखा खुले । ध्यानमा अडिग रहने आफ्नो कुरा हो, र पनि यदि विपश्यनाको लागि जानुभयो भने साथीसग चाहिँ नजानुहोला है । बरु सुटुक्क १० दिन गायब हुनु नै राम्रो !
जुन २७, २००८ (नक्साल)
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, June 27, 20082: Comments
विशेषगरी उपन्यासबाट म पढाइको असली मज्जा पाउँछु । स्कुल पढ्दा सर, मिस अनि आफूभन्दा ठूला दाजु-दिदीले कुरा गरेको सुन्दा उपन्यास पढ्ने रहर औधी जाग्ने गर्थ्यो । तर त्यसताका स्कुलका भुराभुरीले उपन्यास पढ्नुहुँदैन, यसले दिमागलाई कोर्सबुकको पढाइबाट अन्यत्र भुट्छ भन्थे । त्यसैले मन भएर पनि मेरो दादा र म केही बालपत्रिकाहरूको सीमित घेरोमै आफ्नो अध्ययनशीलतालाई खुम्च्याउन विवश थियौँ ।
अध्ययनको धुन कस्तो थियो भने, स्कूलका कोर्सका किताबहरू किनेर ल्याएको दिन नै त्यसमा भएका कथा-कुथुङ्ग्रीहरू पढिसक्थेँ । स्कुले बेलादेखिको उपन्यास पढ्ने तिर्खा भने मैले एसएलसी दिएपछि नै मेट्न पाएँ । १२ मा पढ्ने छिमेककी साथीको पाठ्यक्रमका पुस्तकहरू माइतीघर र मसान नाटक मागिल्याएर पढेँ । स्कुलमा स-साना पाठहरू मात्र पढ्दै आएको कारण सुरुमा त त्यत्रा सिनित्तै पुस्तक कसरी पढ्ने भनेर म आत्तिएँ । तर पढ्न थालेपछि दुई दिनमै दुवै पुस्तक पढिछिचोल्दा अनौठो आनन्द मिल्यो । त्यस बेलाका चर्चित र मैले थाहा पाएसम्मका सुम्निमा, तीन घुम्ती, नरेन्द्र दाइ, मोदिआइन, शिरीषको फूल, पागल बस्तीलगायतका उपन्यास पढेँ । पुस्तक पढेर सकेपछि त्यसैको वरिपरि घोत्लिँदा पनि पुस्तक पढिरहेजस्तै आनन्द आउँछ । यो सायद पठनकै अर्को चरण होला । धेरैजसो पुस्तक पढेपछि नयाँ ऊर्जा पाएजस्तो लाग्छ । सुस्ताएको मनलाई पनि चार्ज गर्ने तागत तिनमा हुन्छ ।
नेपाली साहित्यबाट झाङ्गिँदै विश्वसाहित्यको भन्डारमा पस्दा सुरुवाती क्रममा नेपालीमा अनूदित पुस्तकहरू पढेँ । त्यसबेलामा गोर्कीको आमा, भिक्टर हृयुगोको न्याट्रेड्यामको कुम्वे, पाउलो कोयल्होको द अल्केमिस्ट, पर्ल वकको कल्याणी धर्ती, हर्मन हेस्सेको सिद्धार्थ लगायतका पुस्तक पढेँ । 'सिद्धार्थ'बाट सांसारिक जीवनको खुला परिवेशमा रहेर पनि बुद्घत्त्वसमान ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने दर्शन पाएँ । कतिपय पुस्तकको नेपाली अनुवाद चित्त नबुझेर अंग्रेजीमै खोजेर पनि पढ्नुपर्‍यो । विदेशी साहित्यकारमा पाउलोको पुस्तक सकेसम्म छाडि्दनँ । उनको द अल्केमिस्ट सबैभन्दा मन पर्‍यो । यसले मलाई लक्ष्य सामुन्नेमै घुमिरहेको छ भन्ने सोच भर्दै त्यसलाई धैर्य गरेर पर्खन सिकाएको छ । पाउलोकै फिफ्थ माउन्टेनमा युद्घले तहसनहस संरचनालाई केही व्यक्ति मिलेर पुनः निर्माण गरेको उज्यालो सम्भावनाको कथा छ । उनका प्रायशः कृतिले जीवनप्रति आशा जगाउँछन् । सपना साकार पार्ने पाठशाला भन्दा बढ्ता हुँदैन पाउलोका पुस्तकहरू ।
उमेरको परिर्वतनस“गै मानिसका सोचाइहरू परिर्वतन भएअनुरुप पुस्तकको छनोटमा पनि यस्तो कुराले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । साथै आफू हुर्किरहेको वातावरणले पनि आफूले पढ्ने पुस्तकमा धेरै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पहिले-पहिले निबन्ध भनेपछि टाढा भाग्ने म साथीहरूकै प्रभावले निबन्धहरू पनि पढ्न थालेकी छु । यसहपाठीहरू स्मीता पौडेल, गुरु रेग्मी र शिशिर शर्माको पढन्ते टोलीमा पुस्तकहरू साटफेर गर्दै पढ्ने र कुनै नयाँ पुस्तक आयो कि त छिटछिटो पढिसिध्याएर आपसमा बाँडीचुँडी गर्ने हतारका ती दिनहरू बिर्सिनसक्नुको छ । पहिले-पहिले निबन्ध भनेपछि टाढा भाग्ने म साथीहरूकै प्रभावले निबन्धहरू पनि पढ्न थालेकी छु । पाँच/छ वर्षघि पढेको शंकर लामिछानेको एब्स्ट्राक्ट चिन्तन: प्याज किताबले निबन्धको पठनमा आकर्षण थपिदियो । आत्मपरकताभित्र विषयवस्तुको तिक्खर चेत मैले निबन्धमा खोज्ने गुहृय कुरा हो । यस्ता पुस्तकले आफूलाई बुझ्न र जीवनप्रतिको दृष्टिकोण बनाएर जिउन सघाउने रहेछन् ।।
उपन्यासको प्रेममा फैलिँदा धच गोतामेको घामका पाइलाहरू, ध्रुवचन्द्र गौतमको अलिखित, गोविन्दराज भट्टराईको सुकरातका पाइला र मुग्लानले निकै मोहनी लगाए । आख्यानले मनोरञ्जन मात्र दिन्छ भनिन्छ, तर आख्यानमा भएको कुरा बुझ्न सक्यो भने गैरआख्यानले दिनेजत्तिकै ज्ञान पाइन्छ । तर त्यस्तो गुदीकुरा सबै आख्यानहरूमा हुन्छन् भन्नु सबै गैरआख्यान कृति विशिष्ट हुन्छन् भन्नुबराबर अन्धोको हात्तीछमाइ हुन्छ । पहिलोपल्ट नै कृष्ण धराबासीको झोला कथाले अमिट छाप छाडेको हुनाले उनका पुस्तक सकेसम्म छाडेको छैन । पछिल्लो चरणमा पढेको सञ्जीव उप्रेतीको घनचक्कर सामाजिक-राजनीतिक सूक्ष्मता छामेको नौलो उपन्यास भईकन अधुरो पुस्तक हो जस्तो लाग्छ । पुस्तकभरि खोजैखोजको प्रसङ्ग आएर पनि पात्रको खोजीको ठोस कुरा के हो नखुलेको हुँदा पुस्तक अधुरो लाग्यो ।
विमोचन भएको पर्सिपल्ट नै पढेर सकेको नारायण वाग्लेको 'पल्पसा क्याफे' र पाँच-छ दिनपछि पढेको कर्ण शाक्यको 'सोच' मेरो पहिलो सही छनोट थियो । यस्ता पुस्तक पढ्न बजारको हल्ला कुर्नुपर्दैन । गान्धीको सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा अनि ओशोको मैं मृत्यु सिखाता हु पुस्तकले मलाई तरङ्गति बनाएका छन् । अहिले आएर म अध्यात्मिक पुस्तकहरू पढ्न थालेकी छु । अध्यात्मिक ज्ञान पाउँदै जाँदा पढिएका विविध पुस्तकहरूका सार समग्रमा उस्तै-उस्तै हो झैँ लाग्न थालेको छ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, June 27, 20080: Comments
भवतु सब्ब मङ्गलम्
१० दिनको दृष्टि
चिम्लिनु आँखा अनि प्रस्टसाथ हेर्नु रे !
त्यो पनि सत्यलाई हेर्नु रे !
यस्तो पनि हुन सक्नेछ र ? कल्पनाको ऐनामा सानो तरङ्गसम्म बनेको थिएन । तर धम्मको यात्रामा साम्प्रदायिक सङ्कुचित एवम् ढोंगी सोचको पत्तासाफ हुनु आखिर स्वाभाविक नै रहेछ । 'पूर्व जन्ममा कुनै पुण्य गरिएको थियो होला, तब पो मिल्यो सत्यको यस्तो सङ्गति !', जुन १४ देखि २५ तारिखसम्मको विपश्यना ध्यान शिविर बुढानीलकण्ठस्थित धर्मशृङ्ग मुहानपोखरीमा सहभागी साधकहरूको युवा चेहराबाट पनि अध्यात्मको कमलो वाणी फुटेको थियो । सधैँ बाहिरी दुनियाँमा हराइरहने यान्त्रिक चोलालाई साढे तीन हातको आफ्नै कायामा साँगुरिएर केही खोज्नुपर्ने अमूर्त उडान भर्नु थियो । आफूभन्दा बाहिर अरु वस्तु अनि व्यक्तिलाई हामीले यत्तिका जीवन जिउन्जेल धेरै हेर्‍यौँ, खासमा त्यही मात्र त हेर्‍यौँ । अब सिक्नुपर्ने जीवन जिउने कला थियो । लुकेर रहेको अन्तर्सत्य खोतल्नु थियो अन्तर्तपबाट ।
यस्तो विपश्यना, उस्तो विपश्यना ! चर्चाले बारम्बार कानमा पङ्खा हम्किरहेकै थियो । साथीभाइको सानो जमघट या दाइहरूको कोठे गफ, सबैतिर सानो रुपमै भए पनि विपश्यना शब्दको चिरफार र ध्यान शिविरको अनौठो नीतिनियमबारे तहल्का बहस चल्दा रन्को छुट्ने गथ्र्यो । त्यही रन्कोको गर्भ आफूभित्र बस्न थालेछ र आखिरमा त्यो गर्भ बढ्दै गएर ध्यानशिविरमा प्रकट भएर मौलाउने गर्भाधानको त्यो दिन पनि मेरो आयो । अर्थात् जुन १४ (२००८) तारिख शनिबारको मध्य दिन । यसमा केही व्यक्तिको पवित्र मनको प्रेरक साथ प्रत्यक्ष-परोक्ष रुपमा पाएकोमा तीप्रति कृतज्ञताको शिर नुहेको छ यतिखेर । यस्ता पुण्य हात भएका मान्छे हात छुटेर पनि छोडिनसक्नुका हुन्छन् ।
२० दिन लामो उदयपुर बसाइपछि जुन ११ मा राजधानी फर्किएलगत्तै दुई दिनपछि ध्यानमा जानुपर्ने थियो । अनिताको सुझाव थियो, पहिले नै फोन सम्पर्क गरेर के-कस्तो स्थिति छ बुझ्नू । कुरा मनासिब लाग्यो र नेपाल विपश्यना केन्द्र धर्मश्रृङ्गको कान्तिपथस्थित ज्योति भवनमा रहेको नगर कार्यालय फोन नं. ४२५०५८१ मा सोधी हेरेँ, जाने दिन नै आफ्नो सरसामानसहित कार्यालयमा पुगे हुने रहेछ । विपश्यना साधनाको लागि म १० दिनको ध्यानशिविर पुग्नुमा मेरी निकटतम पात्र तथा यस क्याफे ब्लगकी सह-ब्लगर अनिताले त मलाई उठाएर शिविरको हलभित्रसम्मै डोर्‍याई आसनमा बसाएजस्तै देन पाएको छु । दुई वर्ष पुरानो विपश्यना-साधिकाले मलाई यस्तो धर्मको साक्षात्कारमा पुर्‍याएर कतिसम्म धर्म बटुलिन्, यसको लोखाजोखा छैन । ध्यानको लागि शिविरतिर प्रस्थान गर्नजाने दिन उनको हातको बिदाइलाई घुर्की लगाउँदै बेवास्ता गरेथेँ मैले । शिविरमा साधना गर्दै गर्दा सबै भूलहरू फनफनी फ्ल्यासब्याकमा घुमेर मन एकाएक कतिविघ्न टिलिक्क भयो भने, प्यारा मान्छेलाई सम्झिएर यो मन झन् प्यारोप्यारो हुँदै आयो । प्राणीले प्राणीलाई बाढीजस्तो तेज प्रवाहले गर्न सक्ने र पर्ने यही धर्म त हो आखिर । यो धर्म कुनै जैन, मुस्लिम, पार्सी, ईसाइ, बौद्ध वा हिन्दु नामक सम्प्रदायको लेप लगाएको टक्क ठाडो शिर होइन है ! शुद्ध धर्म मात्र । सद्गुण र सत्यको बाटो । यो कुनै सम्प्रदायको ठेक्काको कुरा त पक्कै होइन ।
विपश्यनाको बोलविशेष किसिमको हेराइ अर्थात् विपश्यना । बहिर्मुखीपनलाई त्यागेर अन्तर्मुखी यात्राबाट संवेदनामय स्वअनुभूतिलाई प्रतिक्रियाबिना सम भएर जान्नु नै विपश्यनाको मूलमन्त्र हो । विपश्यनाबारे भर्खर सुन्न थाल्दा यो कतै बौद्ध धर्मसम्प्रदायको मौजा तन्त्रमन्त्र हो कि भन्ने भ्रम धेरैलाई हुँदो रहेछ । तर यो त नितान्त धर्मको कुरा रहेछ, अर्थात् मानिसमा सत्य र ईश्वरीय गुण जगाउने आत्मिक औषधि । जसको लागि कुनै काल्पनिक श्रद्धामूर्ति चाहिँदैन, आत्माको आश्रय चाहिँदैन अनि चन्दनको चिसो लेप र रटानको मन्त्र पनि चाहिँदैन । विपश्यना आफ्नो मनको मालिक हुने ध्यानविधान रहेछ । नोकरबाट मालिकमा पदस्थापन हुन को नचाहला, तर फेरि यो त आफैभित्रको शासनसत्ताको त कुरा हो ।
मान्छेको मन यति चञ्चल छ, एकाग्रता र शुद्ध सोचबाट भागेर अनेक विकारको आयातमा प्रयोग हुने यो मानौँ विशाल मालवाहक ट्रक हो । यस्तो मनको के हामी उपचार नगरी बसौँ ? कहीँ कतै सानोसम्म पनि जानकारी छ भने अरु सोधखोजबाट बुझेर एकचोटि विपश्यना ध्यानशिविरमा १० दिनको बन्दी हुनुमा नै सबैको कल्याण होला । १० दिनको मौन एवम् धर्मालु बन्दी... अनि त जीवनभरको स्वतन्त्र र स्वाधीन अस्तित्व.... । पस्ने होइन त विपश्यनाको कलकल जरुवामा ? एकचोटि प्रयोग गरेर त हेर्नुस् ! अवश्य सबै गाँठाहरू खुल्नेछन् । तपाईँको भलो होस् ।
जुन २६, २००८ (नक्साल)
हाम्रो माया उकालो लागिरहेछ...
कामबाट थाकेको दिमाग
दौडिँदै तिमीसम्म पुग्छ
अनि आनन्दले मस्त हुँदै
आफ्नो काममा फर्किन्छ ।
हाम्रो सम्बोधनले तगारो ल्याउँछ
अनि एक्लिएर बसेको बेला
सूचाङ्क ओरालो झर्छ
फकाउँदै गुन्जिएका आवाजले
सूचाङ्कलाई उकालोतिर डोर्‍याउँछ ।
सूचाङ्कमा हाम्रो माया
कहिले उकालो चढ्छ
कहिले ओरालो झर्छ ।
जीवन-चक्रको सहयात्री परिसूचाङ्क
उक्लिने र ओर्लिने क्रम पनि
बडो आनन्ददायक छ,
त्यसैले त नेप्से परिसूचाङ्कमा
वेग मारिरहेछ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, June 27, 2008 1 : Comments
चुनावको गफदेखि स्वयंसेवकसम्म
- सरोज बस्नेत
उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी स्नातक तहको अध्ययनका लागि राजधानी छिरियो । अध्ययनसँगै अवसरको सम्भावनासँग नजिकिन धेरैजना आज राजधानीलाई संघर्षमैदानका रुपमा रोज्ने गर्दछन् । म पनि यो सङ्घर्षमा हेलिँदै राजधानी आएँ । क्याम्पसको छनोट गर्ने क्रममा वाणिज्यशास्त्रको राम्रो पढाइ हुने भनेर कहलिएको शंकरदेव क्याम्पस नै रोज्न पुगें ।
घर छाडेर काठमाडौँ आइपुगेपछि मनमा अनेक कुरा उब्जिएको थियो । सुरुका दिन नयाँ ठाउँमा नयाँ मान्छेहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्दा अप्ठेरोसँग बिते । आफैँजस्ता युवा अनुहार भए पनि क्याम्पसका साथीहरू कहाँकहाँका नौला थिए । पाँच-सात दिन त एक्लोपनले सताएर निकै नरमाइलो लाग्यो । बेकारमा जिल्ला छाडेर काठमाडौँ आइएछ भनेर थकथकी लाग्यो । तर पछि बिस्तारै साथीहरूस“ग चिनजान बढ्दै गएपछि त्यही नौलो संसार आफ्नो बन्दै गयो ।
स्नातकमा दुई वर्षघि भर्ना भएयता क्याम्पसमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका साथीहरूसँग परिचित भइयो । फरक-फरक क्षेत्र र ठाउँबाट आएका ती साथीहरूको आनीबानी पनि आफूभन्दा अलग पाउँदा सुरुमा त घुलमिल हुनै गाह्रो भयो । उही नेपाली बोल्दा पनि पूर्वको साथीले बोल्ने र पश्चिमकोले बोल्ने भाषामा ठूलो अन्तर पाएँ ।
बिहान र दिउँसोको सिङ्खटमा गरी कुल १० हजारजति विद्यार्थी अध्ययनरत शंकरदेवमा स्नातक तह दोस्रो वर्षा मात्रै १२ सय विद्यार्थी छन् । जसको असर फाइनान्स र अकाउन्टको कक्षामा भोग्नुपर्छ, विद्यार्थीको चापले खुट्टै हाल्न ठाउँ नपाइने । तीन-चार सेक्सन हुँदा पनि कक्षाको पछाडि र डेक्स-बेन्च लहरबीचको प्यासेज भागमा समेत उभिएर पढ्नुपर्दा के पढियो भन्ने मुश्किलले सम्झिनुपर्ने हुन्छ । समयमै अगाडि ठाउँ सुरक्षित नगरे त्यो पिरियड नै काट्न नसकिने हुनाले विद्यार्थीहरूबीच अगाडि नै आएर बस्नलाई भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेल कुनै रमिताभन्दा कम देखिँदैन । कुनाकन्दराबाट राजधानीमा सबैजना बाढी भएर पस्नुको नतिजा यस्तै हो भन्ने लाग्यो । कसले पढ्यो कसले पढेन, को आयो को गयो त्यो हूलमूलमा कसैलाई सरोकार नभएको देख्दा सहरिया चालचलनमा बानी पर्दै गयो ।
सरकारी क्याम्पसमा राजनीति बढी हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ । त्यसमा पनि शंकरदेव क्याम्पसमा त बढ्तै राजनीतिक ताउरमाउर चल्छ भनेर सुन्दै आएको थिएँ, आखिर सत्य पनि रहेछ । संविधानसभाको पूर्वसन्ध्यामा विद्यार्थी संगठनहरूले कलेजमा दिनहुँजसो कार्यक्रम राख्दथे । क्याम्पस चुनावमय भएको थियो । अञ्चल तथा जिल्लागत रुपमा आ-आफ्नो क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई भेला गराई चुनाव सम्पन्न गर्न गाउँ जाऔँ नारा घन्किएको थियो । कार्यक्रममा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको भाषणले क्याम्पस हाता स-सानो खुला मञ्चझैँ लाग्थ्यो । पढाइमै एकोहोरिने साथीभाइहरू समेत स-सानो समूहमा बसेर चुनावी चर्चा गर्नमा मग्न देखिन्थे । संविधानसभाको चुनाव थियो नै त्यस्तै, सबै जाग्नुपर्ने जुगकै महत्वपूर्ण पर्व ।
चुनावको लागि चैत १५ देखि ३० गतेसम्म शिक्षण संस्था बन्द गरिएकोले समयमै घरतिर गइयो । घर पुगेपछि त झन् आफ्नो स्थानीय परिवेशले गर्दा होला, चुनावकै रौनकले छोपिहाल्यो । दाइ तथा साथीहरूसँग चुनावको सचेतना जगाउन टोल तथा बस्तीतिर स्वयंसेवकका रुपमा खूबै घुमियो । चैतको घाम खेप्दै दुःख गरीगरी चुनावी चर्चामा हि“डे पनि दिनदिनैको बढ्दो माहोलले रमाइलो बटुलियो । यस्तो ऐतिहासिक चुनाव सफल हु“दा त्यसमा आफ्नो संलग्नता पनि रहेको सम्झेर गर्व लाग्यो । चुनावपछि अहिले मुलुक नयाँ दिशातर्फ कोल्टे फेर्ने तयारीमा छ । अबको नयाँ परिवेशमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि शुद्धीकरण तथा परिमार्जन हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसो हुन सकेको खन्डमा समग्र युवा तथा विद्यार्थीको भविष्य अझ व्यवस्थित रुपमा अगाडि डोरिनेथ्यो । भोलि देश कस्तो बनाउँदै लैजाने हो, शिक्षा क्षेत्रलाई नै जगको रुपमा हेरेर सबैले व्यवहार गरिदिए राम्रो हुनेथ्यो ।
जीवन भनेको सङ्घर्षकै अर्को नाम हो । झन् विद्यार्थी जीवनलाई त दुःखीया भनिन्छ । यो दुःखीया जीवनको अनुभव गर्दै भोलि केही राम्रो होला भनेर गाउँबाट यान्त्रिक सहरको हतारोमा सामेल भइएको छ । छिट्टै स्नातक दोस्रो वर्षको परीक्षा पनि सुरु हुँदै छ । सबै विद्यार्थीहरू परीक्षाको तयारीमा जुटेका छन् । पढ्ने सबैका लागि यहाँ अवसर पक्कै छैन । हेरौँ समयले पनि निर्धारण गर्छ, कसरी आफूलाई डोर्‍याउनुपर्ने हो ।
गाईघाट, उदयपुर ।
हाल: शङ्करदेव क्याम्स, खसीबजार, पुतलीसडक ।
उदयपुरमा सिमेन्टको लागि चुनढुङ्गाको प्रचुर खानी छ भन्ने कुरा पुरानो भइसक्यो । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएको नै दुई दशक नाघिसक्यो । र, तपाईँलाई थाहा नभए भनिहालूँ, उद्योगबाट उत्पादित गैंडा छाप सिमेन्ट कतिसम्म गुणस्तरीय छ भने देशभरि लुछाचुँडीमा पर्दा धेरैजसो त उदयपुरभित्रैका बासिन्दाले सिमेन्ट पाउँदैनन् । माग धान्न नसक्ने नमुना उद्योग यो पनि हो एउटा ।
तर उदयपुरको सहरोन्मूख परिवेशमा चुनढुङ्गाको खानी मात्र गन्तीमा आउने कुरा हो र ? पक्कै होइन । यहाँ त लोकसेवापण्डितहरूको छिप्पट खानी पनि देख्‍न सकिन्छ । त्यसो त स्याङ्जा, लमजुङतिरका धुवाँदार पढन्तेलाई उदयपुरका लोकसेवापण्डितले नभेट्लान् । तर पढन्तेहरूको लर्को र तन्मयता हेर्ने हो भने उदयपुरे ठिटाहरूको 'ग्रामीण ऊर्जा'सामु जोकसैले जिब्रो टोक्नुपर्छ । पढ्ने सवालमा उनीहरू गुफाबासी बन्छन् । र, लोकसेवाको पढाइमा यस्तो पलेँटी कसाइ अचूक अस्त्र नै हो ।
बल्ल साँझपख मात्र पढाइको बोझलाई टाउकोमा हलुका टोपी बनाउने धुनमा टहलिनलाई यी पण्डितहरू चौकतिर निस्किने रहेछन् । नत्र अरुबेला त यिनको नाक-मुख देख्न पनि मुश्किल पो हुने गाँठे ! माथिका दुई तन्नेरीहरूसँगको मेरो तस्बिर पनि चौकतिर टहलिने बेलामा साइत छोपेर खिचिएको हो । एक हुन् अङ्कुल थापा (बायाँ चेक सर्टमा) र अर्का बुद्धराज निरौला (दायाँ छेउ) । थापाजी मेरा स्कुले दौँतरी हुन् भने निरौलाजी प्यारा भाइ । अनुभवको मामिलामा थापाजी सबैतिर आँखमिचौली गर्न सक्ने खुबी भएका मनुवा हुन् ।
सम्वत् २०५८ ताका साहित्यबाट सामाजिक सहभागितामा जोडिएका थापाजी युवा सञ्जालको अभियान, राजनीति हुँदै अहिले भने पूर्णरुपेण लोकसेवाको पढाइमा मोडिएका छन् । निजामतीको एक सिट उनको लागि पनि कतै न कतै पर्खिरहेको होला । अर्का हितैषी निरौलाजी हामीले उदयपुरमा २०५८ सालमा दियालो नामक पाक्षिक भित्ते पत्रिका चलाउँदा यसो कवितासमेत कोर्थे । उनी सोझो विश्लेषणमा साधु मानव हुन् । र, उनीसँग त्यस्तो विघ्न सङ्गत पनि गर्न नपाएकाले बाँकी कुरा मेरानिम्ति निराकार छ ।
भेट हुँदा दुवैका कुरा मैले सुनेँ, मेरा कुरा दुवैले सुनेँ । कुनै बेला अचम्मै छाँटले लोकसेवाको किताबमा उनिन थालेको मलाई उनीहरूको यात्रामा समभाव जनाउन मन लाग्छ । ध्यान र लगन त ठूलो कुरा हो जिन्दगीमा । बाँकी कुरा त गोरेटो आफैँ हाम्रा सम्मुख आएर जवाफ दिइहाल्छ । एक टुक्रा जिन्दगी जागिरे यात्राको निजामती सेवामा पनि छ । तर त्यही नै सबथोक त होइन, कसो ?
शुभ होस् थापाजी !
सफलतम निरौलाजी !!
जून १४, २००८ (नक्साल)
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, June 13, 20080: Comments
सहरिया गाउँको खबर (आँप संस्मरण)
मे २३ (जेठ १०) गते काठमाडौँ छोड्दा बालापनमा नाङ्गैभुतुङ्गै रल्लिएको उदयपुरको माटो पक्रिहाल्ने हतारो थियो । यात्रामा साथी हुनलाई साथमा काकी तम्तयार हुनुहुन्थ्यो अनि थिई बहिनी, फुपूकी छोरी । कताकता नरमाइलो उकुसमुकुस पनि साथै थियो, निकटतामा रत्तिएका चीजबीजको सङ्गतिदेखि केही समय विमुख हुनेछु भन्ने अनुभूतिले । र पनि घरको गहिरो प्रीतिले तानेरै डुबाउन बोलाएको थियो ।
यात्रा सहजै पार भयो, स्कुलस्तरीय पाठ्यपुस्तक पाइएन भनेर चितवनमा विद्यार्थीहरूले गरेको २ घन्टे चक्काजामबाहेक । यस्तैयस्तैमा अलिक बेर भयो र पनि साँझपख त टुप्लुक्क घरको आँगन टेक्न पुगियो । सन्तान आफ्नो समीपमा आएको खुसीमा मक्ख परेको ममीको मुहार देख्दा यात्राभरिको सबै थकाइले छुट्टी लियो । अनि त खाना खाइसकेपछि आरामले आमा-छोराको भलाकुसारी चल्यो । र पनि आमाको मन हो, थकाइ लाग्यो छोरालाई भनेर बिछ्यौनातिर मार्गनिर्देशन भयो ।
घर पुगेपछि त्यही हो, खानपानमा जोड दिनैपर्ने प्रेमिल बाध्यता, ग्रामीण हावापानीको शुद्धता, साथीभाइको सहरप्रतिको चाख र सोधखोज, जताततै हरियो एकरुपता......। कतै हरियो मकै पोलेर खाने बेला भएको छ, कतै बोट र घोगा नै झिरिप्प सुकिसकेको छ । धानको बीउ राख्न धमाधम छ । आँप, लिच्ची र हरियो मकै बिस्कुट र चाउचाउका काटुनमा हाल्दै दूरदराजका आफन्तकहाँ कोसेली पठाउने मान्छेहरूको ताउरमाउर पनि कतिविघ्न रहरलाग्दो ! रुख कटहर तरकारी खाने उमेरभन्दा छिप्पिन थालेछ, अब त अलिबेरमै पाकेको गुलियो स्वाद । उता भुइँकटहर भर्खर दानामा रस हाल्दै छ ।
काठमाडौँमा गणेश हिमालले साउती मारेको चिसोपनमा बसिरहेको मान्छे भित्री मधेसको गाउँ छिर्दा गर्मीले छोपिहाल्यो । जुनसुकै कुरा पनि बानी रहेछ । पछि बस्दै गर्दा त्यही गर्मी शरीरमा बस्दै गयो । यसपालीको मौसम केही विचित्र नै रहेछ, जेठ मध्यतिर पाक्नुपर्ने जातका आँप पनि काँचै रहृयो । घर बसुन्जेल एक चानो आँप मुखमा परेन । र पनि यतिखेर आँप-संस्मरण लेख्न बसेको म । अचम्म छैन त ? कोरेसोमा कोरेर छोप हाली बनाएको आँपको ताजा अचार भने मजाले खान पाइयो, त्यो पनि ममीको हातको जादु !
घर गएको बेला एउटा कुरा भने दुःखपूर्ण हुने गर्छ, एउटा फुटेको अक्षर पनि पढिँदैन । दुईचार दिनको पाहुना बनेर रमाइन्छ, त्यस्तैमा फर्किने बेला भइहाल्छ । वल्लो घर पल्लो घरको डुलाइ, साथीभाइ भेटघाट, सदरमुकामको सफर, खेतका आलीहरूमा चक्कर...... अनि त पढ्ने कुरा कता-कता । तर पनि यसपालीको २० दिने बसाइमा कसो हुनाले दुई औपन्यासिक किताब छिचोल्न भ्याएँ- फ्रान्सेली साहित्यकार अल्वेर कामुको (परचक्री) लाट्रेन्जर र जर्मन लेखक फ्रान्च होलरको ढुङ्गाको बाढी । दुवैले उत्तिकै मन छोए । कामुको परचक्रीमा एक ठाउँमा म पात्र मरसोल्ट सम्झिन्छ-'आमाले भन्नुहुन्थ्यो-'मानिस सबै किसिमले दुःखी र अभागी हुँदैन, यस्तो बेलामा पनि सुख दिने केही कुरा हुन्छ ।' आशा जगाउने कुरा पुस्तकमा फेला पार्न सक्नु, यही त हो अक्षरहरूको उपहार । जुन ११ तारिखमा राजधानी फर्किने बिहान मेरी ममीले पनि मलाई सायद मौन भावले यस्तै केही आशीर्वाद दिइरहनुभएथ्यो ।
जुन १३, २००८ (नक्साल)